Degso Chernobylite loogu talagalay Windows
Chernobylite waa ciyaar cilmiga fiqiga ah ee naxdinta leh ee rpg. Baadh sheeko aan toos ahayn oo ku saabsan baadi-goobkaaga si aad u soo bandhigto runta baroor-diiqdaadii hore ee aad ugu macquulsanayd, 3D ee la baaray ee Aagga Ka-reebitaanka Chernobyl.
Soo dejiso Chernobylite
Chernobylite waa ciyaar door-badbaadin cilmiyaysan oo ka socota soosaarayaasha Farm 51. Ku dheji xajmiga dhabta ah, 3D ee la baaray ee aagga Chernobyl ee la mamnuucay, waxaad qaadataa doorka Igor, oo ah fiisigis iyo shaqaalihii hore ee Warshadda Korontada Chernobyl. Waxaad ku soo noqotaa Pripyat si aad u baarto qarsoonaanta qarsoon ee arooskaaga 30 sano ka hor. Markaad raadineyso inaad runta daaha ka qaaddo, waxaad la dagaallami doontaa ciidammada cadawga ah, kuwa raadraacayaasha kale iyo xayawaannada ka sarreeya, iyo sidoo kale jawi qallafsan oo aan naxariis lahayn.
U diyaargarow xiisaha xiisaha leh ee badbaadada, shirqoolka, naxdinta, jacaylka iyo waswaaska. Ma ka takhalusi kartaa cabsidaada?
Aasaaska Saldhigga iyo Wax -soo -saarka - Samee saldhig u qorshee hawl -maalmeedkaaga iyo safaradaada. U isticmaal meeshaada farsamaynta aaladaha, dabinnada iyo hubka, ama wax ka beddel qalabkaaga hadda jira si aad ugu haboonaato baahiyahaaga.
Khayraadka iyo Maareynta Kooxda - Wehelku waxay lagama maarmaan u yihiin badbaadadaada iyo safarkaaga sii socda. Maalin kasta waxay u baahan tahay qorshayn taxaddar leh iyo meelaynta khayraadka iyo hawlaha aad u dhiibto saaxiibbadaada.
Xatooyo, Badbaadinta iyo Khilaafka - Badbaadinta aagga ma sahlana, iyadoo maalin walba ay soo baxaan caqabado cusub maadaama saaxiibbadii ay dhintaan hantiduna dhammaato. Ka fogow soo -gaadhista weerarada qarsoodiga ah ama ku dhex -rid xabad furan. Halistu waxay ku gabbataa gees walba.
Sheekooyinka iyo Istaraatiijiyadda Aan -Qummanayn - Ma jiraan laba waddo -ciyaar oo isku mid ah. Sheekadu gacantaada ayay ku jirtaa, sida xulashooyinkaaguba. Si xikmad leh u dooro haddii aad ku kalsoon tahay saaxiibbadaada, u isticmaasho ilaha badbaadada ama cilmi -baarista, oo aad wajahdo ama iska ilaaliso khilaafyada. Mustaqbalka adiga ayaa iska leh.
Horumar: The Farm 51
Soo Degso PUBG PUBG waa ciyaar royale dagaal ah oo aad ka soo dejisan karto kana ciyaari karto...
Rockstar, abuuraha taxanaha GTA, wuxuu sii daayay Grand Theft Auto 5, ciyaartii ugu dambeysay ee...
Wolfteam, oo ku jirtay nolosheena ilaa 2009, waxay soo jiidataa dareenka astaamaheeda gaarka ah, oo...
Goobta dagaalka 2042 waa ciyaar kufsi badan oo bartilmaameedka koowaad ah (FPS) ciyaar ay soo...
World of Warcraft maahan ciyaar kaliya, waa adduun ka duwan ciyaartoy badan. In kasta oo aan ku...
Valorant waa Riot Games ciyaarta FPS-ka-ciyaar-bilaashka ah. Ciyaarta FPS Valorant, oo la socota...
Paladins waa ciyaar ay tahay inaadan seegin haddii aad rabto inaad ciyaarto ficil xoog leh FPS. ...
Chernobylite waa ciyaar cilmiga fiqiga ah ee naxdinta leh ee rpg. Baadh sheeko aan toos ahayn oo ku...
Dota 2 waa fagaaraha dagaalka multiplayer online - mid ka mid ah xafiiltamaan ugu weyn ee kulan...
Soodejiso Fortnite oo bilow ciyaarta! Fortnite asal ahaan waa ciyaar badbaado iskudhaf ah oo leh...
Wicitaanka Waajibaadka: Vanguard waa ciyaar FPS ah (qofkii ugu horreeyay toogtay) oo ay soo saareen...
Salaan dheh ficil aan xadidneyn aduunyada ay ku badantahay fowdada Cross Fire. Keenida aragti...